हिरो र होण्डा मोटरसाईकललाई चुनौती दिँदै टिभिएस मोटरसाईकल र स्कुटरको चमत्कारः आयो एक्स–टी स्कुटर जसले टिएफटी स्किनमै क्रिकेट स्कोर देखाउने ? - Aathikbazarnews.com हिरो र होण्डा मोटरसाईकललाई चुनौती दिँदै टिभिएस मोटरसाईकल र स्कुटरको चमत्कारः आयो एक्स–टी स्कुटर जसले टिएफटी स्किनमै क्रिकेट स्कोर देखाउने ? -
कुनै बेला नेपाली बजारमा एकछत्र राज गरेको हिरो होण्डा मोटर साईकल र स्कुटरको व्यापार पछिल्लो समय घटेको मात्रै छैन । यसको विकल्पमा ग्राहकहरुले टिभिएस ब्राण्डका मोटरसाईकल र स्कुटर लिएका छन् भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । विगत केही वर्षबाट टिभिएसको नेपाली डिलर शंकर समूहले लिएपनि स्कुटर र मोटर साईकलको विक्रीमा चमत्कार नै भएको छ भन्दा फरक पर्दैन । स्टायल र नयाँ डिजाइनका टिभिएसका ब्राण्डलाई नेपाली ग्राहकले मन पराएपछि पूरानो बजारमा स्थापित हिरो र होण्डा ब्राण्डका मोटरसाईकल र स्कुटरको बजार ह्वातै घटेको भेटिएको छ । युवापुस्ताको रोजाईमा टिभिएस ब्राण्डका स्कुटर र मोटरसाईकल परेसंगै भारतमा हालै टिभिएसले एउटा यस्तो स्कुटर लञ्च गरेको छ । यसबारेमा चर्चा गरौं ।
टीभीएस एनटर्कको नयाँ संस्करण एक्स–टी सार्वजनिक भएको छ । टीभीएसले आफ्नो लोकप्रिय १२५ सीसी स्कुटर एनटर्कको नयाँ भेरियन्ट घोषणाको एक वर्षपछि भारतीय बजारमा ल्याएको हो । भन्दा फरक पर्दैन । यस स्कुटरमा एक्स–टी हाइलाइट गरिएको छ । एनटर्कको शक्तिशाली भेरियन्टलाई रेस एक्स–टी भनिन्छ । एनटर्क टीभीएसका उत्पादनमध्ये बजारमा निकै धेरै चलेको स्कुटर हो । भन्दा फरक पर्दैन ।
यसलाई स्मार्ट कनेक्टको कनेक्टिभिटी प्लेटफर्म दिइएको छ, जसमा सेग्मेन्ट फर्स्ट–इन–क्लास सुविधाहरू उपलब्ध छन् । केही दिन पहिले टिजर देखाइएकोमा यो हाल सार्वजनिक गरिएको हो । यसको टप ट्रिममा एनटर्कले सवारी मोड देखि ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी सम्म पालैपालो नेभिगेसन, ल्याप टाइमर देखि एलइडी हेडलाइट जस्ता सुविधाहरू सहित पूर्णरूपमा डिजिटल उपकरणहरू प्राप्त छ ।
टीभीएस मोटरसाइकलहरूले भर्खरै प्राप्त गरिरहेको एउटा नयाँ सुविधा भनेको सस्पेन्सन एडजस्टबिलिटी हो । यसैलाई यसमा पनि समावेश गरिएको छ । यस पालिको नयाँ स्कुटरमा टीभीएसले १२४.८ सीसी इन्जिनको संस्करण धेरै निकाल्ने गरेको छ । रेस एक्स–टी भेरियन्ट १०.२ हर्सपावर रहेको १२५ सीसी एनटर्क नै सबैभन्दा शक्तिशाली स्कुटर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । टीभीएसको लोकप्रिय स्कुटरको नयाँ एक्स–टी भेरियन्टमा थीन फिल्म ट्रान्सिस्टर (टीएफटी) स्क्रिन छ, जसले नयाँ सम्भावनाहरू समावेश गरेका छन । टीएफटी एक रोचक नयाँ उपकरण क्लस्टर हो, जसले एलसीडी डिस्प्लेको साथमा टीफटी स्क्रिनको विशेषता रहेको हाइब्रिड डिजाइन समावेश छ । एनटर्कले लामो समयदेखि ब्लुटुथ जडान सुविधा प्रदान गरेको छ, तर टीएफटी स्क्रिनको थप गरेको देखिन्छ ।
यो नयाँ संस्करणको एनटर्क एक्स–टीमा रहेको टीएफटी प्रणालीले राइडरलाई सामाजिक सञ्जालको सूचनाहरू, खाना वितरण ट्रयाकिङ जानकारी, मौसम पूर्वानुमान र इयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्युआई) डेटा, क्रिकेट तथा फुटबल गेमको स्कोरहरू देखाउन सक्नेछ । यस्ता कुराहरु ट्राफिक जाम वा सिग्नलमा जहाँ भए पनि हेर्न सकिन्छ । यो कम्पनीको इन्टेलिगो स्टप–स्टार्ट प्रणाली फिचर गर्ने एनटर्कको पहिलो संस्करण पनि हो । यसैगरी ब्लुटुथ जडान सुविधाले कल र एसएमएस अलर्टहरू र पालैपालो नेभिगेसन गर्न सजिलो बनाएको छ । यस अगाडिको भन्दा अहिलेको नयाँमा कल आउँदा कलरको प्रोफाइल टीएफटी स्क्रिनमा देखिने छ । यो नयाँ एक्स टीको माइलेज ६० किलोमिटरसम्म रहेको छ । यस नयाँ संस्करणको स्कूटरमा धेरै उपयोगी नयाँ सुविधाहरू छन् ।
यो ब्रान्डले विगतमा एनटर्कको विशेष संस्करणहरू, विशेष पेन्ट र ग्राफिक्स योजनाहरू, विशेष गरी सुपर स्क्वाड संस्करणहरू लन्च गरेको छ जुन प्रतिष्ठित मार्बल क्यारेक्टरहरू पछि स्टाइल गरिएको छ । भारतमा यो नयाँ स्कुटरको मूल्य भारु १ लाख २ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक १४ वर्षमा प्रवेश, पुँजी २७ अर्ब पुग्यो